Ummanni Keenya Humna Keenya! | QEERROO
Posted on December 11, 2017 by Qeerroo
Barattoota keenya dararuun, barataa keenya ajjeesuun akkuma itti fufetti jira. Uummatni Oromoo humna Waraanaa Wayyaaneen weeraramee jira. Weerara kanaan ardaan Oromoo barbadaa’uutti jira. Uummata Oromoo lafasaa irratti waraana itti banuun lafarraa buqqaasuu irratti kan argamu humni garboonfataa TPLF ilmaan Oromoo mooraawwan Yuunibarsiitii keessaa dhabama gochuuf kallattiin waraana irratti banee jiraachuun ifaadha. Har’a barataa Oromoo mooraawwan Yuunibarsiitii Oromiyaa keessaa irratti waraana Agaazii ramaduun barattoota shororkaa, reebaa, Hidhaa kan jiru Wayyaaneen, Barataa Oromoo fi saboota Cunqurfamoo impaayera biyyatti Naannoo Oromiyaan alaa irratti ilmaan isaa duulchisuun ajjeesisaa jira.
Addatti mooraa Yuunibarsiitii Addagiraat keessatti, gochi mootummaa Wayyaaneen kallattiin barattoota Oromoof Saboota cunqurfamoo impaayera biyyattii irratti raawwataa jiru kan nama dararu ta’uu himna. Gochi Uummata Oromoo irratti Oromummaa isaa qofaaf hidhaaf ajjechaa cinatti lafarraa buqqaasuuf barnootarraa dhaabuun raawwatamaa jiru kan balaaleffatamu ta’uu gadjabeessinee himuu feena. Addunyaa barnootaan fagaataa jiru keessatti, barnootarraa afaan qawween barataa Oromoo ari’uun, akka hinbaranneef mooraa barnootaa keessaa barataa Qawween ari’anii baasuun yakkoota addunyaarratti raawwatee hinbeekne Wayyaaneen raawwachaa jiraachuu hubachiisa.
Uummata barnoota dhowwachuu jechuun uummata sana lafarraa dhabamsiisuun tokko akka ta’e eenyu duraa dhokataa miti. Yakka kana haguuggachuuf akka waan barataan ofiin mooraa barnootaa lakkiseetti lallabaataa jiraachuun wayyaanee badii ishee dhoksachuuf kan watawataa jirtu taatullee ragaawwan qabataamaa suuraan deggaraman of harkaa qabaachuun keenya akka ishiin saaxilamtu nii taasisa. Har’a Mooraawwan Yuunibarsiitii Oromiyaa barataan Oromoo mooraa barnootaa ba’ee humna waraanaa Wayyaaneen guutamee jira.
Akkasuma humni waraanaa Wayyaaneef Barattoonni ilmaan Tigiree uummatatti guddachaa jiran waliin ta’uun barataa Oromoo mooraa Yuunibarsiitii Addagiraat keessatti ajjeesaa kan jiran yoo ta’u yakka kana addunyaan akka nuu dhaga’uuf irra deddeebiin uummata keenyatti sagalee akka nuu taatan nii dhaammanna.Uummanni keenya taankii keenya. Humna taankiif, snapper, Qawwee meeshaawwan waraanaa gurguddaan daguuginsa sanyii nurratti raawwataa jiru addunyaan utuu dhageessuu callisuun hinfeesisu.
Waan ta’eef Uummanni Keenya nuffii malee uummata keenya miliyoona walakkaan ardaa dhabaa jiruuf sagalee ta’uufiin dirqama Oromummaan isinirraa barbaadudha. Nuti biyya keenya keessatti, dararamuun, ajjeefamuun, dhiitamuun, hidhamuun utuu dabaree nutti wal jijjiiruu; dhiyeenya lafa keenyaaf qabeenya keenya dhabaa kumaan lakkaa’amnee du’uurra jirra. Kanaaf callisuun furmataa akka hintaane hubatee, qaamni Oromoof falmu kamuu alaaf keessaa uummata keenyaaf akka dirmatu dhaamna. Sirna bulchiinsa Wayyaanee ammaa kan uummata keenya goleessaa jiru ta’uu qaamni kamuu hubatuu qaba. Uummata keenya daangarraaf dirmmannaan akkasuma barataan Oromoof isa duriin olitti amma barbaachisa